Itoobiya oo Mowqif lama filaan ah ka qaadatay Go’aanki Trump ee Qudus. – Xeernews24
Itoobiya oo Mowqif lama filaan ah ka qaadatay Go’aanki Trump ee Qudus.
Dowlada Ethiopia ayaa daboolka ka qaaday inaysan adeeci doonin go’aanka uu Madxaweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Qudus ugu hibeeyay Israel.
Ethiopia waxa ay sheegtay in howlaha Safaaradooda ay kasii socon doonto caasimada Israel ee Tel Aviv, isla markaana ay ka fiirsan doonaan Go’aanka Trump.
Ethiopia waxa ay sheegtay in Safaaradeeda Tel Aviv aysan u rari doonin magaalada Qudus inta ay meel uga dhaceyso xiisada ka taagan arrinta Qudus oo meel xun gaadhsiisan.
Meles Alem oo ah Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Ethiopia ayaa hadalkan ka sheegay Shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia.
Meles Alem, waxa uu cod dheer ku sheegay in Go’aanka Donald Trump uu yahay keliya mid ku kooban dowlada Mareykanka oo u muuqaneysa inay xiisad ka dhex dhalineyso dowladaha Islaamka iyo kuwa rumeysan diimaha kale.
Meles Alem, waxa uu cadeeyay in Mowqifka Ethiopia ee xiisada Qudus ay tahay mid lamid ah Mowqifka Midowga Afrika ee dhex dhexaadka ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Go’aanka Qudus looga dhigaayo caasimada Israel qaatay arbacadii hore oo ku asteysaneyd December 6, 2017.
Docda kale, Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa tan iyo markaasi dhaleeceeyeen tallaabada Trump oo ay ugu yeedhen dib u dhac ku yimid dadaalka nabadda ee u dhexeeya Israel iyo Falastiin iyo halis ammaan oo ku aaddan gobolka Bariga Dhex.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/gambela1-300x272.jpg 272 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-11 09:37:022017-12-11 09:37:02Itoobiya oo Mowqif lama filaan ah ka qaadatay Go’aanki Trump ee Qudus.
SHIRQOOL + Sawirro: Yaa ka dambeeyey in Qudus loo gacan gasho Israel ? Erdogan: Isra’iil waa argagixiso ee Carabeey tallo mideysan baa lagaa rab...